Vietnamjet dia mandefa ny làlana Hanoi - Yangon, Myanmar
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Vietnamjet dia mandefa ny làlana Hanoi - Yangon, Myanmar
Aogositra 28, 2017
Vao haingana i Vietnam no nandefa ny làlam-pifandraisana iraisam-pirenena vaovao mampitohy an'i Hanoi (Vietnam) sy Yangon (Myanmar). Nanatrika izany lanonana izany Andriamatoa Pham Binh Minh - Mpikambana Politburo, praiminisitra lefitra ary minisitry ny raharaham-bahiny avy any Vietnam ary olo-manan-kaja ambony avy any Vietnam sy Myanmar.
Ny fanombohana ny zotra vaovao dia namboarina ara-potoana mba hamenoana ny tsena fitsangatsanganana any amin'ireo firenena roa tonta ary antenaina fa hampiroborobo ny fizahan-tany sy ny mety ho fandraharahana eo amin'ny firenena roa tonta. Ny lanonana dia tao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny fitsidihana ofisialin'i Nguyen Phu Trong, sekretera jeneralin'ny antoko kominista ao amin'ny Komity foibe Vietnam any Myanmar.
Ny zotra Hanoi - Yangon dia miasa isan'andro isan'andro miaraka amin'ny sidina 1 ora 55 minitra isaky ny tongotra. Miainga ho any Yangon ny sidina amin'ny 12.05 hariva ary tonga amin'ny 1.30 hariva (ora eo an-toerana). Manomboka amin'ny 2.30 hariva ny sidina miverina ary tonga any Hanoi amin'ny 4.55 hariva (ora eo an-toerana).
Hanoi izao no rohy faharoa an'i Vietnam ao Yangon, Myanmar aorian'ny tanànan'i Ho Chi Minh. Noho ny fitoviana ara-kolontsain'izy ireo, Vietnam sy Myanmar dia toeran-kaleha lehibe amin'ny fampanjariam-bola sy fampandrosoana ekonomika matanjaka. Ity rohy vaovao ity dia antenaina handray anjara amin'ny fampandrosoana ny fidirana isam-paritra ary hampiroborobo ny varotra eo amin'ny firenena roa tonta.
Miaraka amin'ny fotoana mahamety azy sy ny saran-dalany mahavariana, ny làlana vaovao dia manolotra fotoana tena tsara ho an'i Vietjet hampiasa vola amin'ny fitomboan'ny tinady amin'ny fivezivezena ary hanolotra safidy ho an'ireo mpandeha eo an-toerana sy mpizahatany iraisam-pirenena ho an'ny drafitry ny dia.
Yangon - tanàna lehibe indrindra any Myanmar dia malaza amin'ny mpizahatany amin'ny kolontsaina nentim-paharazana sy ny hatsaran-tarehy tsy manam-paharoa. Ny tanàna koa dia mirehareha amin'ireo trano vaovaon'ny mpanjanatany betsaka indrindra ao amin'io faritra io ary itoeran'ny Pagoda Shwedagon voaravaka - pagoda bodista masina indrindra ao Myanmar. Ho tsangambato ara-tantara, any afovoan-tanàna Yangon koa dia manana ny anjarany manintona miaraka amin'ireo lampivato nilahatra niaraka tamin'ireo mpivarotra sakafo sy tsena malalaka misokatra. Azo antoka fa nanampy tamin'ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny fizahan-tany io tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Hanoi - ny renivohitra sivilizasiôna Vietnam maoderina dia niatrika fanovana haingana tao anatin'ny folo taona. Heverina ho iray amin'ireo tanàna tsara indrindra amin'ny tanàna zanatany indonezianina, ny arabe feno moto ao Hanoi dia betsaka no azo atolotra ho an'ny mpitsidika, manomboka amin'ny valan-javaboary sy tranombakoka mahafinaritra ka hatramin'ny trano fisakafoanana amina sisin-tany sy kafe misy kilasy manerantany.
Aerolíneas Argentinas sy Etihad Airways nanao sonia fifanarahana codeshare
Qatar Duty Free manokatra an'i Polo Ralph Lauren ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Hamad
Efitra vonjy taitra any New York: Tsy amerikanina, mahatsiravina ary mampidi-doza